Mepee taa 9: 00-16: 30
Ihe ngosi ihe ngosi nka "Onye ọ bụla na-ahọrọ! Ryuko Memorial Collection"
Ngosi ọmụma nkọwa
2021 / 12 / 14 Ndị ọzọRyuko Kawabata "Tiger Room" abanyela na "Museum Zodiac Collection Award 2022"
2021 / 12 / 12 ỌrụIhe ngosi Masterpiece "Onye ọ bụla na-ahọrọ! Ryuko Memorial Collection "Gallery Talk
2021 / 12 / 04 ỌrụNdị sonyere na nkuzi eserese Japanese nke mbụ "Gosai no Sumie"
2021 / 10 / 31 ỌrụRyuko Memorial Hall Reiwa 3rd Year 4th Memorial Hall Lecture "Ryuko Kawabata / Contrary to Yokoyama Taikan"
E guzobere ylọ Nzukọ Ncheta Ryuko na 1885 site na Ryuko Kawabata (1966-1963), onye a maara dị ka nna ukwu nke eserese ndị Japan n'oge a, iji cheta Order nke Culture na Kiju.Site na mgbasa nke Seiryusha, nke na-arụ ọrụ site na mbido, ewegharala azụmahịa ahụ dịka Halllọ Ncheta Ota Ward Ryuko kemgbe 1991.Lọ ihe ngosi nka nwere ihe dịka 140 Ryuko na-arụ ọrụ site na mmalite oge Taisho ruo oge agha, ma na-ewebata ihe osise Ryuko site n'ọtụtụ echiche.N'ime ụlọ ngosi, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị dị ike na-adọrọ na nnukwu ihuenyo.
A na-echekwa ụlọ ochie na atelier na Ryuko Park, na-abụghị oppositelọ Nzukọ Ncheta Ryuko, ị ka nwere ike ịnwe ume ndụ nke onye na-ese ihe.
Ogige Ryuko na-echekwa ụlọ ochie na nnweta nke Ryuko n'onwe ya mere.
Panorama lee ọdịnaya site na iji igwefoto ogo 360.Nwere ike ịnweta nleta nleta na ylọ Nzukọ Ncheta Ryuko.
Ọrụ Ryuko Memorial na ime ụlọ ngosi, ihe osise Ryuko kachasị amasị ya, na ebe a na-ese foto nke Ememe Ncheta ahụ.
Monday ọ bụla (n'echi ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ezumike)
Childrenmụaka (afọ 6 gafere) ・ ・ ・ 100 yen (Otu 20 ma ọ bụ karịa: Ndị okenye 160 yen / 80mụaka XNUMX yen)
Kpebisiri ike oge ọ bụla dịka ọdịnaya nke ọrụ ahụ si dị.